प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १ बैशाख २०७८, बुधबार १७:५९
गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष सहित सात जना बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भष्टूाचारको आरोपमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । नौलीखोला तेस्रो लघुजलविद्युत आयोजना मर्मतको क्रममा भष्ट्राचार भएको ठहर सहित अख्तियारले मुद्धा दर्ता गरेको हो ।
आयोजना मर्मत गर्दा लागेको भन्दा धेरै खर्च देखाएर बिल मिलाई भुक्तानी गरेको आरोप छ । अहिले स्थानीय तहले संचालन गरेका योजनाको अनुगमन निरीक्षण गर्ने पहिलो जिम्मेवार ब्यक्ति वडा अध्यक्ष हुन् । उपभोक्ता समितिले सहि काम गरेको, नगरेको बारे वडा अध्यक्षले जानकारी राख्नुपर्छ । नियम अनुसार काम नभएको भए तत्काल सुधार गर्न लगाउनुपर्छ । वडा अध्यक्षले निरीक्षण अनुगमन गरेर ठिक काम भएको छ भने मात्र भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । त्यसपछि प्राविधिकको अर्को महत्वपूणर् भुमिका रहन्छ । प्राविधिक स्टमेट अनुसार काम भए/नभएको बारे उसले ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँबाट पनि भष्टूाचार रोक्न सकिन्छ ।
गाउँपालिका तहमा रहेको अनुगमन समितिले पनि निग्रानी गर्न सक्छ । अन्तिम भुक्तानी लिने बेला योजना अनुसार काम भएको छ छैन भन्ने चेकजाँच पालिका स्तरीय अनुगमन समितिले पनि गर्न सक्छ । ठिक काम भएको छ भने मात्रै भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यतीबेला लेखा र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको भुमिका पनि महत्वपूणर् हुन्छ ।
गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको हकमा सदरमुकाममा बसेर काम भए नभएको सोध्ने, उपभोक्ताले नभएको कामलाई पनि भएको छ भन्ने, असारको अन्तिममा बिना अनुगमन हतार हतार भुक्तानी दिने परिपाटीले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । प्राविधिक, जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई प्रभाव र दबाबमा राखेर भुक्तानी दिलाउँदाको यो परिणामले अन्यत्र पालिकालाई पनि सजग हुन पाठ सिकाएको छ ।